UThixo, udelele ixesha elingakanani le mzuzu! Zingaphi iilungiselele ingqondo yakhe, ikhethile engqondweni yakhe impendulo enhle kunye nenhle kwisiphakamiso sakhe. Kwaye kwafika kungalindelekanga kwaye yakuphazamisa. Ngoko, kukho umcimbi obaluleke kakhulu phambi kwakho - ngokokuqala ngqa uza kuhamba nomhla kunye nalowo mfana onobuhle, oye watyathwa ngaphezu kosuku olunye. Yonke into, ngoku yonke into yokuthabatha iingqungquthela kunye ne-winks sly inokushiywa ngexesha elidlulileyo - emva komso ebusuku kuya kubonisa ihlabathi lonke ukuba unawe, kwaye unayo. Kodwa yima! Kuthekani ukuba akayithandi le ntlanganiso kwaye akafuni ukuqhubeka? Ingaba usuyikwesaba? Funda inqaku elithi "Umhla wokuqala kunye nomfana: indlela yokuziphatha?" - kwaye uya kufunda ezininzi iinkcukacha ezinobulumko kunye noluncedo oluza kukunceda ukuba unqobe.
Usuku lonke uhlala nomcango omnye kuphela: "Thixo! Umhla wokuqala kunye nomfana, indlela yokuziphatha, okokugqoka, ukuthetha ntoni? ". Ngokukhawuleza sikucebisa ukuba uhlalise uze uze kwiintliziyo zakho. Ukuba namhlanje unomdla kude kube sebusuku kwaye ungalali kakuhle, kusasa uya kuba neengcongolo ezincinane zentlungu phantsi kwamehlo akho, ngokuqinisekileyo akunakukugcoba. Ngoko cinga ngeembonakalo zakho uze uzidibanise kunye. Namhlanje ufanele ujikelezwe kuphela ngumxhasi omhle malunga nomcimbi ozayo.
Umhla wokuqala ngowona ubaluleke kakhulu, kuba le ntlanganiso inokuthi isigqibo - ingaba ubuhlobo bakho buba nekamva, nokuba ufanele uhlangane kunye okanye udibana nenkohlakalo yokufa? Amantombazana athambekele ekunciphiseni iimvakalelo zabo: bacinga ukuba lo mfana bafuna ukudala intsapho kwaye bahlale bevuya ngokuzayo. Kodwa abafana banokulula, azinakwenzeka, ufike ngomhla, cinga ukuba ungumlingane wobomi bakhe. Ngoko ke, kuya kufuneka uzame nzima ukuba ungaboni ubuso nobuso kwidaka.
Unokuthetha ixesha elide malunga noko kufuneka ugube ngomhla wokuqala, yintoni inwele yokwenza, kunokugqithisa. Nangona kunjalo, yonke into yongcamango, eyakho kunye nendoda oya kuyo. Okubaluleke kakhulu umbuzo: indlela yokuziphatha nomfana ngosuku lwakho lokuqala? Indlela yokwenza umxholo ochanekileyo, ukubonakalisa ukuba uyakufanelekela ingqwalasela yakhe, kwaye ukuba, ukhe ukhetha, uya kwenza ukuphumelela ukuphumelela?
Isiluleko sethu sokuqala kukuzithemba wena kunye nento othethayo. Unokwenza iimpazamo ngokufaka into ethile, kodwa kufuneka ukhangele njengendlovukazi. Amadoda azivakalela ukuzithemba, le ntombazana iya kubathanda kakhulu kunokuba ngubani, ehleli echaseneyo, eneentloni. Mhlawumbi umntu ofana nale ntombazana enamahloni. Ngubani na ohlala nje ephulaphule kwaye ephazamisekile ngentshiseko ezandleni zeeplateki zamaphepha. Kodwa kuninzi ukufumana ingqalelo kwindoda kukubonisa indlela ethile, ubuncinane ukungenisa zonke iintambo zeengxoxo.
Ukuba ngumhlobo othakazelisayo uyona nto ebalulekileyo ekuphumeleleni. Ewe, kuyacaca ukuba akubona bonke abanikezelwa ngezakhono zendalo zonxibelelwano, kungekhona zonke iintombazana ziya kukwazi ukuthatha inxaxheba kumntu oncokolayo. Kwakhona, umva wehlazo-isidima saloo mntu wesibini. Ukuba unamahloni kwaye ukwesaba ukuba incoko ayiyi kusebenza - kufuneka uqhubeke uzama ukuqala. Kungcono kunokuba ucebile kwaye ujonge phantsi. Ewe, ukuba iqabane lakho lingumntu onomdla onokuthi uphonsa isihloko esithakazelisayo kwaye ugcine intetho iya kuyo ukuze ufumane indawo kuyo. Apha, kwakhona, zama ukujonga ngendlela ethembekileyo ngamagama akho. Nika indoda ukuba ivelele ingundoqo yakho yangaphakathi, kodwa ungaguquli intonga - indoda ekhankeni ngabantu abambalwa kakhulu ngoku.
Ukuba awukwazi ukuba yeyiphi isihloko ukuqala incoko - khumbula into eyenziwa ngumfana wakho. Ukuba ubuncinane ubuncinci "kwinqaku" -susa isizathu esithile kumbango, oya kuba nomdla kuye. Kwaye ukuba ungayiqondi yonke into endiyithandileyo, mbuze imibuzo ecacileyo, njengokungathi bafuna ukufunda ngale nto yokuzonwabisa xa kunokwenzeka. Ngaloo ndlela, uya kubulala iintaka ezimbini ngelitye elinye. Okokuqala, incoko iya kungena kwisiteshi esisebenzayo, esiya kuba mnandi kakhulu kumnxibelelwano wakho. Ukongezelela, akudingeki ukhulume kakhulu, kuya kuba nexesha lokukhwabanisa kwaye uziva ngayo "kwiplani enye". Kwaye inxalenye yesibini yale ncoko yophuhliso kukuba awuxhase kuphela intetho, kodwa yenza ukuba ikuxelele ngokwakho, yifunde ngakumbi. Ewe, mnike kuphela umntu inkululeko yokuzikhethela - uya kuthetha ngokukhawuleza malunga noko akuthandayo. Ukongezelela, uya kuba nomdla onomdla kuwe - unomdla omkhulu kwinto yokuzonwabisa kwaye ulungele ukuphulaphula amabali akhe ngeeyure! Kwaye oku, ngokungathandabuzekiyo, kukudibanisa.
Umzuzu olandelayo. Yiyiphi into ekumele ibeke ingqalelo kumhla wokuqala - oku kukhangeleka. Zonke izibuko ozenzayo kumntu omfana kufuneka zizaliswe ngeemvakalelo ozivelayo kuye. Nangona kunjalo, iimbono ezichanekileyo zigqitywa ngokukhawuleza-ngoko umxelele nje ukuba sele esele anqobile. Kodwa kufuneka kube nemfihlelo entombazana! ... Khangela kuye njengokungathi ngaphantsi kwe-eyelashes yakhe, ngokuqinileyo, kodwa ngobumnene, ngaphandle kokumbamba iminyaka engaphezu kwemizuzu embalwa. Yigcine inqabileyo - makheke i-pomuchitsya, ukuqagela: ngathi, okanye akunjalo. Musa ukukhangisa ngokusobala isimo sakho sengqondo, uba ngumntu onomdla othakazelisayo, kwinkqubo yokutshutshisa apho unokukwazi ukuwa thandana.
Qaphela ngokucophelela impawu yakho, musa ukutshintshana ngeengqondo zakho iingalo nemilenze, uxelele imeko ecacileyo ebomini. Kodwa nokuba nokuba yindoda enzima, kwakhona, ungasincoma - kuyo yonke into kufuneka ibe nenjongo yegolide. Ukuba unemvakalelo enomntu kwaye awukwazi ukuyenza ngaphandle kokugulisa, zama ubuncinane ukuzilawula. Ngaphandle koko, loo nto inokubonakala ngathi unomntu ongenalulinganiselayo kwaye unomdla, kwaye ubani ofuna ukuthetha naye?
Intetho yakho ibaluleke kakhulu. Akufuneki kuphela ukuthakazelisa ngokwemiqathango ye-semantic, kuyafuneka kwakhona ukubeka iliso ngobumsulwa. Nangona umfana oye wafika ngalo mhla, uyazivumela ukuba athethe igama - akuthethi ukuba ufanele uphendule ngalo kwaye usebenzise inhlamba kwingxoxo. Ndikholelwe, amadoda amaninzi ayithandi amantombazana angcolileyo awaziyo ukudibanisa amagama amabini. I-intelligence elula, i-humor efihlakeleyo kunye nentlalo engapheliyo - ezi zikhadi zamacilongo zowesifazane kunoma yimuphi umhla, akumele ulibale malunga nalo.
Kwaye akunandaba nokuba uthatha isigqibo sokuba ugqoke kunye nokokubeka emilenzeni enhle. Into ephambili yindlela oza kuzibonisa ngayo. Uyazi, kukho uluvo olunjalo ngabantu - oku luhlobo lwempahla, intengo umntu ayenzayo ngokuziphatha kwakhe nokuziphatha kwakhe. Ngoko ke sibonakale njengezigidi, kwaye ke umntu ngamnye uya kuhlonelwa ukuguqulela umhla wokuqala ube ngumtshato osisigxina!
Ndingayenza njani inxaxheba kumntu ngaphandle kweengxaki?
Ndingayifaka njani ingcamango yakhe entloko?
Umyeni ukhangelelana noononopopayi - wenzeni?
Uthando oluyimfihlelo: 3 izizathu zokuba ulwalamano olucaleni lubangela uvuyo olungakumbi kunentsapho
Umlingisi wokuthakazelisa uAlexei Chadov
Pancake cake "Teshina uvuyo"
Isipinashi kwi-batter ne-chutney sauce
I-Easter kubantwana: ukhetho lwemidlalo edlalwa ngabantwana ngePasika
Indoda nomfazi: Ikhulu lama-21
I-cookie pie ebisi olumuncu
Intsapho yam iya kuthenga!
Indlela yokulahla amanqaku amnyama ebusweni
Iimbali zobusuku kubantwana
Indlela yokukhetha i-watermelon